TALOS 200 | CLAAS (Myanmar)
Call Us Now (+95 9) 255 113 473
CROP TIGER 40.
CROP TIGER 40 TERRA TRAC.
၁။ စက်မောင်းခန်းကို အဲယားကွန်းခန်းနှင့်သော်လည်းကောင်း၊ ပေါင်းမိုးနှင့်သော်လည်းကောင်း ရရှိနိုင်ပါသည်။
၂။ Mechanical or Electronic Rear Linkage control
၃။ Three double-acting spool valves /six connectors
၄။ Automatic Function For PTO / Electronic rear linkage
၅။ Special Sealed Drives ကြောင့် စိုစွတ်သော စပါးခင်းထဲတွင် မောင်းနှင်လျှင်လည်း အထူးကောင်း မွန်ပါသည်။
၆။ တစ်နာရီ ဝ.၂ ကီလိုမီတာ အထိ လျှော့မောင်းနိုင်သောအနှေးဂီယာပါဝင်သည်။
၇။ ဂီယာရှေ့ ၂၀ ချက် ၊နောက် ၂၀ ချက် ( Mechanical Reverse ခလုတ်ပါဝင်သည်။)
၈။ တစ်နာရီ ၄၀ ကီလိုမီတာနှုန်းအထိ4Wheel Drive မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုသည် ပထမဖြစ်စေရန်အတွက် ထုတ်လုပ်ထားသော Models များဖြစ်ပြီး Roll bar (ROPS) ပေါင်းမိုး (သို့မဟုတ်) အဲယားကွန်း စက်မောင်းခန်းဟူ၍နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ လိုလျင် လိုအပ်သလို ချိန်ညှိ၍ရသော စတီယာတိုင်နှင့်လွန်စွာသက်သောင့်သက်သာရှိသော ထိုင်ခုံတို့က ထွန်စက်မောင်းနှင်သူအား တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းများ ကောင်းစွာလုပ်ရန်အတွက် များစွာ အထောက်အကူဖြစ်စေပါသည်။ ရိုးရှင်းသော မောင်းနှင်မှုပုံစံသည် Ergonomic ဟုခေါ်သော အန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှု ပတ်ဝန်းကျင်လုပ်ငန်းခွင်နှင့် ကိုက်ညီပြီး အလုပ်စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်စေရန် အတွက် ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
မည်သို့ပင် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းသော အလုပ်ဖြစ်နေပါစေ Electrohydraulic Operation စနစ်က လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လွယ်ကူလျှင်မြန်စွာ ပြီးစီးစေနိုင်ပါသည်။ PTO အနေဖြင့်လည်း 540rpm/540Eco/ 1000rpm တို့ အပြင် ground PTO စနစ်ပါပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့် 540 Eco PTO mode သည် သုံးစွဲသူစက်၏ ဆီစားနှုန်းကို လွန်စွာမှ သက်သာစေပါသည်။
one-piece bonnet တပ်ဆင်ထားသောကြောင့် စက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာ စက်ခန်းကို အဖွင့်အပိတ်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Power Core air filter သည် သာမာန် air filter များထက်ကောင်းမွန်၍ ဖုန်အမှုန်အမွှားများ အင်ဂျင်ထဲသို့ မဝင်စေရန် တားဆီးပေးသလို
Removable Grille မှာလည်း ရေတိုင်ကီအတွင်းသို့ အညစ်အကြေးများ မဝင်အောင် တားဆီးပေးပါသည်။
ထယ်ရေးထယ်ကြောင်းခက်ခဲသော ကွင်း၏ အမျှောင်းအစွန်းနေရာများတွင် လွယ်ကူသွက်လက်စွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ကွေ့ခြင်း၊ ချိုးခြင်း စသော စတီယာတိုင်လုပ်ငန်းနှင့် မခြင်း၊ ဆွဲခြင်း စသောလုပ်ငန်းများကို 22ml/min output power ထွက် steering hydraulic pump နှင့် 60ml/min output power ထွက် rear linkage နှင့် spool valves hydraulic pump ဟူ၍ hydraulic pump ၂ လုံး သီးသန့်ပါရှိသောကြောင့် CLAAS Talos series ထွန်စက်များသည် အခြားသော စက်များနှင့် ပို၍ သာ၍ ထယ်ရေးထယ်ကြောင်း ခက်ခဲသော ကွင်း၏ အမျှောင်းအစွန်း နေရာများတွင် ကောင်းမွန်သွက်လက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။ CLAAS Talos ထွန်စက်များသည် အချင်းဝက် (၃.၄) မီတာ ချိုးကွေ့နိုင်ပါသည်။
© 2017-2021 Octagon International Services Co., Ltd. All Rights Reserved. Web Design by NetScriper